Basikety – Somaroho 2018 : Nanarina ny lesoka i La Réunion -
AccueilVaovao SamihafaBasikety – Somaroho 2018 : Nanarina ny lesoka i La Réunion
Basikety – Somaroho 2018 : Nanarina ny lesoka i La Réunion
Niditra tamin’ny andro faharoan’ ny fifanintsanana amin’ny hetsika iraisam-pirenena
« Basikety Somaroho 2018 » andiany faharoa. Fifaninanana eo amin’ny sokajy N1A lehilahy ary tanterahina ao Nosy-Be, ao amin’ny kianja mitafo, ny 28 jolay hatramin’ny 4 aogositra izao. Hatreto, saika nampiseho ny fahaiza-manaony avokoa ireo ekipa mpandray anjara amin’izany.
Teo amin’ny fihaonana teo amin’ny andro faharoa, nanarina ny lesoka ny ekipan’i Saint-Denis, La Réunion. Raha toa mantsy ka ratsy fiditra teo amin’ny andro voalohany ry zareo Renioney, niezaka izy ireo ary nandresy ny ekipan’ny zandary, ny GNBC Vakinakaratra, tamin’ny isa tery, 59 noho 52. Niady hatrany am-boalohany ny fihaonana satria dia nifanenjika hatrany ny isa ary nifamaliana ny fanafihana, saingy tsy tafavoaka ny ekipan’ny zandary noho ny fanariana fanafihana ka hain’ity ekipa vahiny mpifanandrina taminy ity ny nanararaotra izany nahafahan’izy ireo naka fandresena.
Tsy nampoizina kosa indray ny fihaonan’ny BCM avy atsy Mayotte tamin’ny MB2All Analamanga. Raha toa mantsy ka nahazo fandresena nanoloana ny Cosmos Secren Diana ry zareo Mahore teo amin’ny andro voalohany (93 – 73), lavon’ny MB2All Analamanga tamin’ny isa mazava, 87 noho 63, izy ireo teo amin’ny andro faharoan’ny fifanintsanana isam-bondrona.
Ankoatra izay, nahazo fandresena fanindroany ny ASCB Boeny. Nanilika ny Cosfa Analamanga tamin’ny isa 78 noho 58 izy ireo teo amin’ny andro faharoa raha efa nandresy ny MB2All Analamanga tamin’ny isa 73 noho 71 teo amin’ny andro voalohany.
Mbola mitohy ny fifanintsanana isam-bondrona amin’ity andiany faharoa amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Basikety Somaroho 2018 » ity ary hotaterina anao an-gazety eto ihany ireo voka-dalao. Marihina fa eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny hetsika, izay ny fikambanana Valim-babena no mikarakara izany. Ny vola azon’ny fikambanana kosa dia atolotr’izy ireo ho fanampiana ny Hopitaliben’i Nosy-Be.
Tanterahina nanomboka omaly ary hitohy anio. Taorian’ny tany Paris tamin’ny taon-dasa, tanterahina atsy Prétoria- Afrika atsimo ny fihaonambe ho an’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho an’i Madagasikara. Mitarika ny delegasiona mafonja, ahitana minisitra sy ...Tohiny